အဆင်မပြေသေးလို့ပါ…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » အဆင်မပြေသေးလို့ပါ……	29
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Jan 31, 2015 in My Dear Diary | 29 comments
ရှည်လာတဲ့ ဆံပင်လေးညှပ် အုံးမှ ဆိုပြီး ဆံသဆိုင်ကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆံပင်ညှပ်သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း ညှပ်သူက ကိုယ်ခေါင်း ကို ညှပ် ကိုယ်က ဘာရယ်ညာ မပာုတ် အာလာပသာလာပြော…….
“အိမ်ထောင်ကျတာ 10 နှစ် ရှိပြီ၊ ကလေးမယူသေးတာက
အဲ့ဒီမှာ စပြီလွဲတော့တာပဲ၊အရာရာအားလုံး အဆင်ပြေမှ လုပ်မယ်ဆိုရင်…ကျွန်တော်မေးချင် မေးခွန်းက…..
“ဘယ်တော့…အဆင်ပြေမှာလဲ”၊မျက်မှောက် ခေတ်မှာ လင်ကော၊မယားကော ပြေးပာယ်၊လွှားပာယ် အလုပ်လုပ်နေ
ကြရတာ နားလည်လို့ရပါတယ်၊အဆင်ပြေမှ….မိသားစုခရီးလေးထွက်မယ်….မိန်းမ လိုချင်တဲ့ပာာလေး ဝယ်ပေးမယ်
…သားသမီးတွေ လိုချင်တာတွေ…ဝယ်ပေးမယ်၊သက်သက်ဖြုန်းနေတာ ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။လူတွေပာာ တဖက်က ငွေကို သိမ်းကြုံး ရှာနေပြီးတဖက် က ကိုယ်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်သွားတာ မသိလိုက်ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ပက်သက်လို့ ကျွန်တော့် မေမေ ပြောခဲ့တဲ့စကား
လေးတွေ ကို ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်၊
“အမေလေ..အသက်25နှစ် ကလည်း အဆင်မပြေဘူး၊သားတို့ မွေးပြီး တော့ 35နှစ်တုန်းကလည်း အဆင်မပြေဘူး၊
သားတို.တွေ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေး
တဲ့ 45နှစ်တုန်း ကလည်း အဆင်မပြေဘူး၊အခု မြေးတွေ ရလာတဲ့ အသက် 60မှာလည်း အဆင်မပြေသေးပါဘူး၊ဒါပေမယ်.အမေ သားတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်တွေကိုမဖြုန်းခဲ့ပါဘူး…..သားရယ်”
ဘဝရဲ့ နေဝင်ချိန် ဆိုတာ ခဏလေး ရောက်သွားမှာပါ၊သည်ကာလ လေး အတွင်းမှာ “အဆင်မပြေ သေးလို့ ပါ”
ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်တွေကို ဆုံးရှုံးပေးလိုက်ရတော့မှာလား……….
– ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တွေ့ကြမှာပါ… ဒါလေးက မူရင်းရေးသူကိုပဲ ခရက်ဒစ်လို့ ပြောပါရစေဗျာ… ရှယ်ကြတာ အများကြီးပဲ ဖြစ်နေလို့ပါ….
– ခံစားချက်ကလေး တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါ… တကယ်ကို အဲသလို ဖြစ်နေတယ်… ကျွန်တော်တို့ကတော့ အချိန်မနှောင်းသေး အရွယ် မကြီးသေးပါဘူး…
– သို့သော် ကလေးလိုချင်လို့ စဉ်းစားလိုက်ရင် အမေ့ဆေးဖိုးရယ်၊ ဈေးဖိုးရယ် လစာရယ်က အားပြိုင်နေကြတယ်…
– မလောက်ရတဲ့ အထဲ စိုက်ပါ စိုက်နေရတယ်… လစဉ် ၁ သိန်း ထပ်ထည့်နေရတယ်…
– ကိုယ့်ရင်သွေးပဲ လိုချင်တာပေါ့ဗျာ.. အဲဒါဖတ်ပြီး ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်တွေးပြီး မျက်ရည်လည်လာလို့ တင်လိုက်တာပါ… ဆောရီးပါ…
မြစပဲရိုး says: နင်းနင်း ရယ်
လောကကြီး ထဲ ဘယ်အရာမဆို အကောင်းချည်း မရှိဘူး နင်းနင်း ရဲ့။
အဆိုးလဲ တွဲ နေတာ။
ဒီတော့ ကလေး ရှိခြင်း အကောင်း တွေ ကို ကလေး ရှိခြင်း အဆိုး တွေ နဲ့ ချိန် ဆကြည့်လေ။
ဘယ်ဟာ ကပိုလဲ လို့။
တကယ်တော့ ကလေး ကို ကျွေး ရမှာ ကို အမေ့ ကို ကျွေးနေတာလဲ ပျော်စရာပါဘဲ။
အားလုံး ကို လိုချင်တာ မဖြစ် ရင် ဖြစ်လာတာ ကို နေတတ်လိုက်တာ က ဘဝ မှာ ပိုပြီး တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: ကိုယ့်ရင်သွေးကို အင်မတန်လိုချင်မိပါတယ်… အရီးရယ်… သို့သော် မွေးမှု တခုထဲ မဟုတ်ဘူးဗျ… ကျွန်တော့်လို ပင်ပင်ပန်းပန်း မကြီးပြင်းစေချင်တော့ အကုန် လိုက်ချိန်နေရတာပါ… ပြီးတော့ လစာက နည်းနည်းလေး ပိုရင် မပြောဘူး.. ခုက မပိုတော့ အမေနဲ့ ကလေး ဘာကိုရွေး အခြေအနေဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်ပဲ ရူးမှာ… ဘယ်သူ့မှ လက်မလွှတ်ချင်ဗျာ… လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ… ခုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ… ကလေးယူမယ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကိုရေမြင်း။ ခလေးက သူ့အထုပ်နဲ့ သူလာတာ။ သူ့ဟာသူ အဆင်ပြေသွားတာ။ သတ္တိရှိရှိ ခလေးယူလိုက်၊ စီးပွားတက်လာလိမ့်မယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… အန်တီပြုံး မြှောက်ပေးလို့ ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဗျာ… ကျေးဇူးပါ… အမွှာပူး တကယ်မွေးဖြစ်ရင် အန်တီပြုံးကို တယောက်လာထိန်းခိုင်းမယ်… ဘာလို့ ဆိုတော့ ကလေးတွေက အဖေတူသားတွေဆိုတော့ မျောက်ရှုံးလောက်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: လူတွေနေတဲ့ဤဒွန္ဒယာကြီးမှာ.. လူသားကလေးမွေးဖို့.. မိဘတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်.. အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းနေတဲ့… နေရာဒေသဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့..။
naywoon ni says: ကျုပ်​က​တော့ အဆင်​မ​ပြေ​သေးလို့ အိမ်​​ထောင်​ကိုမကျရ​သေးဘူး မ​နေစ​ကောင်းဘူးဆိုရင်​ သူဂျီး စမူဆာ​ပေးပြီး အ​မေ ဒီးကားကို​ခေါ်ပါ့လားဟင်​
kai says: “If the mountain won’t come to Muhammad then Muhammad must go to the mountain.” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အမ်​မ​ရေး သူဂ အ​မေဒီးကား ဂို လမ်း​ရှောက်​လာရမယ်​​ပေါ့ အဆင်​မ​ပြေပါဘူးဆိုမှ ဖိနပ်​ဖိုးကုန်​​အောင်​လုပ်​ချလိုက်​ပျံဘီ
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်တယ်.. အဘနီရေ… တဂျီး ဒီးကားကို ခေါ်ရင်တော့ အဆင်ပြေမလား မသိနော်… :P
Yae Myae Tha Ninn says: တဂျီးရယ်… ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပဲ တွေးရတော့မယ်… ကိုယ်တိုင်က အတိတ်ကံ နည်းခဲ့တော့… ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပဲ ဖြေတွေးနေတော့တယ်… မဟုတ်ရင် စိတ်က တင်းကြပ်ပြီး တအားမွန်းလာလို့… ခုတော့ ကျွန်တော် အားတင်းပြီး ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ… မလောက်လဲ ညဘက် ဆိုက်ကားထပ်နင်းတော့မယ်… မဖြစ်ရင်တော့ တကယ်နင်းမှာ မရှက်ပါဘူး…
hmee says: ဒါများ အလွယ်​​လေး သူများ​တွေလို ​ယောက်​ခမအိမ်​ ကပ်​​နေ​ပေါ့။ က​လေးနှစ်​​ယောက်​လည်း ​ယောက်​ခမ​တွေ တာဝန်​ယူထားတယ်​။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အဲလိုတော့လဲ မဖြစ်ဘူး.. အန်တီမှီရဲ့… အမေက ကျွန်တော်မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး… မနက်ပိုင်း အင်ဆူလင်ထိုးဖို့ ဆေးစုပ်တာ.. မနက်စာ ကျွေးတာ… ဆေးထည့်ပေးတာ… အကုန်က ကျွန်တော်လုပ်မှ ရတာ… ယောက်ခမ လဲ ဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး… သူ့မှာလဲ ကလေးက ၅ ယောက်တောင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
အလင်းဆက် says: ဆရာကြီး ပီမိုးနင်း ရေးတဲ့ စာတစ်ပိုဒ် သတိရတယ်ဗျ…
လူငယ်လေးတွေ မိန်းမတို့ ကလေးတို့… ယူစရာ ရှိ ယူသာယူချလိုက်တဲ့…
ယူပြီးရင်..နောင်တ ရ မရကနောက်..
သိပ် စဉ်းစားလွန်းရင်… နောက်ကျပြီး..နောင်တ ရမှာစိုးလို့…. ဆရာပီမိုးနင်းက ပြောတာ… ——
ကျနော်လည်း..သိပ်စဉ်းစားလွန်းနေလို့.. အခုထိ မိန်းမ မရဘူး..
naywoon ni says: အလက်​ဆင်းဒါးရယ်​ နီဂ​ဖွေး​ဖေ်ွးဂိုမရလို့မို့လား ယူချင်​ရင်​​ဒေါ့ ​ဖွေး​ဖွေးနဲ့ တစ်​ခုခုတူတာ​တွေ့ရင်​ ယူပလိုက်​​ဒေါ့ နာရိုဖစ်​​နေမစိုးလို့ ​ပေါဒါ
Yae Myae Tha Ninn says: ယူမှာဆက်ဆက်ရေ.. ယူမှာ စိတ်မပူနဲ့တော့… အားရှိသွားပြီ ဆက်ဆက်ရဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အိုအေ
အလကားးးရတဲ့ လေစိုက်ပြီးး အောက်မေးးလှုပ်ရုံ အားးအားးးယားးးယားးးးမေးးးတာတွေ ခံစားးးမနေနဲ့ နင်းးးနင်းးးးး
ကိုယ့်ဘွ ကိုယ်ပဲ သိတာ
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးကျေးပါ… ဇီဇီ… အခုတော့ ကိုယ့်ဘွကိုယ် သိပေမယ့် နဂိုကထဲကလဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ယူဖြစ်မယ်ဆိုတာ.. စိတ်ထဲ မပြတ်တာနဲ့ ပို့စ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ထဲ ဖီးလ်ဖြစ်လို့ တင်လိုက်တာ.. အခုတော့ အားပေးသူများတာနဲ့ ယူတော့မယ်… ဟီး…
Mike says: .ကျုပ်သဘောကတော့ ခြစ်ခြုပ်ပြီး ငွေစုတော့…ငွေအမောင့်တစ်ခုကို လစဉ်ဇွတ်ဖယ်ထား
.မွေးဖွားစရိတ်အတွက် ရခါနီးရင် ကလေးယူတော့
.မပြုံးပြောသလိုပဲ ..ကလေးတွေက သူ့ဟာနဲ့သူလာတာပါ
.အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်.. ဦးMike ကျွန်တော် ဒီတခါ ဘောနပ်ထုတ်ရင် ကလေးအတွက် သီးသန့် ဖယ်ထားလိုက်တော့မယ်… ကလေးလဲ ယူပါတော့မယ် ခင်ဗျား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9
ခင် သုတ says: ကလေးကမိဘအတွက်တော့ရတနာတစ်ပါးပါ။ကလေးရှိတော့ကိုယ်လည်း၂ဆလောက်ကြိုးစားချင်စိတ် တွေရှိလာမှာပါ။အရာအားလုံးကသူ့အလိုလိုအဆင်ပြေသွားမှာ။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ခင်သုတရေ.. လာရောက်အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ… စိတ်ချပါ.. ဒီတနှစ် ယူပါပြီဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အခုမှ သတိရတယ်။ ရွာထဲမှာ အလက်ဇင်းရယ်၊ အဘနီရယ်၊ အန်ကယ်ကြောင်ရယ်ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချနိုင်တဲ့လူ မပေါ်သေးဘူး။ အဲဒါကို ရွာ့အပူတပြင်းကိစ္စလို့ သတ်မှတ်ပြီး လုပ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။ အထူးသဖြင့် အန်ကယ်ကြောင်ကိုပေါ့။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ပါ့.. အန်တီပြုံးရေ…. ဒါကို ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ဖြေရှင်းရမယ်နော့… :P
ခင်ခ says: ရိုးရိုးလေးဘဲတွေးကြည့် မိဘအရွယ် အသက် ၃၀ မှာ ကလေးရရင် ထိုကလေးဘွဲ့ရပြီးတဲ့ နောင်အနှစ်၂၀ မှာအလုပ်ထဲဝင်ရောင်ချိန် ( မြန်မာပြည်ကျောင်းပညာရေးစနစ်အရ ၁၅နှစ်ခန့်ဆယ်တန်းအောင် ဘွဲ့လေးနှစ် ပေါင်း ၂၀နှစ်ခန့်) မိဘက အသက် ၅၀ ဖြစ်ပြီး ဒါဆို ယေဘူယျအားဖြင့် မိဘလည်း အလုပ်လုပ်နေအရွယ်လောက်ဘဲရှိသေး၊ မိဘအသက် ၄၀ မှာကလေးယူရင် ထိုကလေး ဘွဲ့ရပြီး မိဘက ပင်စင်ယူ အသက် ၆၀ ပြည့်လေပြီ အလုပ်စခါစမှာဘဲ မိဘ၀န်ကို ထိုကလေးထမ်းရနိုင်ဖွယ်ဆိုတော့ ဒီထက်နောက်ကျသောအရွယ်မှ ယူရင်တော့ ပူပင်ရမှုတွေ ပိုနိုင်ဖွယ်ပါဘဲ၊
ကျန်းမားရေးရှု့ထောင့်အရလဲ အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးမီးဖွားခြင်း က ကောင်းတယ်လို့ညွှန်းကြတယ်။
kai says: မြန်မာပြည်မယ်… သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်.. လက်ပူတိုက်စနစ်နဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သာလုပ်.. သားသမီးတွေကိုမှီခိုရတဲ့.. ဘ၀ပုံစံဖေါ်… အရှေ့တိုင်း..အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး.. သားသမီးက အိုမင်းမစွမ်းမိဘပြန်ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဓလေ့ကို.. အတင်းကာရောထိုးသွင်းပြီး.. လုပ်နေတာတွေရပ်…
သက်ကြီးရွယ်အို.. စီနီယာစစ်ဒဇင်တွေကို.. ဆိုရှယ်ဆားဗစ်..ပင်စင်စနစ်နဲ့.. တိုင်းပြည်ကပြန်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုံစံကို.. ဖေါ်သင့်တယ်..။
ခဏနေ.. ဆရာမောင်သာရရဲ့.. စာတပုဒ်တင်ပေးမယ်…။
သိစေသတည်း… မြန်မာဝန်ကြီးများ..သိစေသတည်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: သားသမီးထံက ပြန်ကြည့်ဖို့ထက် ကိုယ့်ဇနီးမောင်နှံအလုပ်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နေနိုင်ချိန် သားသမီးက အလုပ်လုပ် ၀င်ငွေရနေပြီမို့ သူ့နောင်ရေးစိတ်အေးဖွယ် အရွယ်ကာလနမူနာတွက်ပြတာပါ။ ကိုယ့်ဇနီးမောင်နှံ ပင်စင်ယူအလုပ်ဝင်ငွေမရှိမှ သားသမီးအလုပ်စလုပ် အဆင်မပြေရင် ကိုယ်က ထောက်ပံနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုကောင်းရဲ့ အဲလိုမဟုတ်ရင် မိဘတွေပူပင်သောကဖိစီး မှာကိုပြောတာသဂျီးရေ။ မိဘအများစုက သားသမီးဆီကပြန်ရလိုမှုနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ကြတာမျိုးတော့ မဟုတ်တန်ဘူးကွယ်။
kai says: စာတင်လိုက်ပြီဗျို့..။
မြန်မာပြည်မယ်.. ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး.. မိဘတွေ.. သားသမီးတွေ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လိမ်.. သူများကိုလိမ်နေတာများလှပေါ့..။
ဒီလိုခေတ်မှာ.. ပွင့်လင်းမြင်သာရှိစေချင်..။ အဲဒီကနေ.. အဖြေရှာ.. သေချာတဲ့.. စနစ်တခုဆောက်ကြစေချင်..။
မှတ်ချက်။ ။ ဦးကြီးခကို.. တိုက်ရိုက်ရေးနေတာမဟုတ်ရပါနော..။
ဒီလိုပဲ..အကြောင်းအချက်လေးပေါ်လာရင်.. တွေးရင်း..ဆွေးနွေးငြင်းခုန်…။ အနုစိတ်သုံးသပ်…။ ပညာ..သညာတွေရှာ..။
ငြင်းခုန်ခြင်းရဲ့..အနုပညာ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: ဟုတ် သဂျီး နားလည်ပြီးသားပါ ဒါကြောင့်လဲ ခုချိန်ထိ ကျုပ်ရွာထဲမှာ ဆက်ရှိနေတာပေါ့ဗျာ။
Yae Myae Tha Ninn says: အခုမှပဲ ကျွန်တော်ပို့စ်လေး ပိုပြည့်စုံသွားတယ်… ကျေးဇူး… တဂျီး နဲ့ ကိုခ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.